Transport uye Logistic - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Munzvimbo yanhasi inokurumidza kufamba zvinhu, iyo yekufambisa & indasitiri yezvigadzirwa inoumba musana wemazuvano epasi rese cheni. Ndege nenhandare dzendege, makambani anotakura zvinhu, vanogadzirisa zvinhu uye mamwe makambani ekufambisa ese chikamu chehurongwa hwekuchengetedza vanhu nezvigadzirwa parwendo. Mobile & makore mhinduro inogona kunyanya kuvandudza mashandiro & kumhanya kwese kuyerera.
Iwo Logistics services inosanganisirwa pamatanho ese mukuronga uye kuitiswa kwekufambisa kwezvinhu, nekudaro zvinova zvinonyanya kukosha kwavari kuve nehupo hwavo pamhepo uye kugadzirisa basa ravo online.
Isu tinosvitsa logistics webhu dhizaini iri kuona kuvimbisa, injini yekutsvaga yakagadziridzwa, yekutsvaga midhiya yakagadziriswa yakakosha pakufambisa bhizinesi idzva kwauri. Isu tinoisa zvakanyanya kusimbisa pazano, dhizaini, kufamba uye kurongeka kwakarongeka kufona-kune-chiito.
1. Bvunzurudzo iri nani kukutengesa mitengo yekutendeuka
2.Maitiro ekutengesa nekukurumidza
3. Zvimwe zvekutengesa uye zvekufambisa zvinotungamira zvinotungamira
4. Yakagadziriswa injini dzekutsvaga
5. Zvinoshamisa zvemukati zvewebsite yako
6. Inbound uye inobuda manejimendi manejimendi manejimendi
7. Fleet manejimendi & yekuchengetedza
zvishandiso kubata & kurongeka kuzadzikiswa